Nepali Rajneeti | च’र्चा’मा का’जो’लको सुन्द’रता !
च’र्चा’मा का’जो’लको सुन्द’रता !
जेठ १४, २०७८ शुक्रबार १४८ पटक हेरिएको
को-रो’ना महामा’री र ल’क’डा’उनका कारण घरमै बसिरहेकी काजल सामा’जिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन्।
घरभित्रै रहँदाका विभिन्न तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै आइरहेकी काजलले पछिल्लो समय सूर्यास्त नियाल्दै गरेको तस्बिर भने भा’इ’रल बनेको छ। धेरैले निकै राम्रो तस्बिर सेयर गरेको भन्दै काजलको तारिफ पनि गरेका छन्।
इन्टाग्राममा सेयर गरेको तस्बिरमा काजल घरको कौसीमा बसेर सूर्यास्तको सुन्दर दृश्य नियालिरहेको देखिएकी छन्। सुन्दर सूर्यास्तरको दृश्यसँगै उनको पहिरनले पनि चर्चा बटुलेको छ।
उनले नीलो रङको कपडा लगाएर सूर्यास्तको म’ज्जा लिएकी थिइन्। ल’कडा’उनको समयमा उनले आफूलाई घरभित्र पनि निकै व्यस्त राख्दै आइरहेकी छन्। खानाका विभिन्न परिकार बनाउनेदेखि सिला’इबुना’इका काममा पनि उक्तिकै सक्रिय रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ।
काजलले पति गौतम कि’चलु’सँगको तस्बिरलाई पनि बेलाबेलामा सेयर गर्दै आएकी छन्। उनले हालै प’तिसँगको एक तस्बिर सेयर गर्दै आफ्नो ‘स’पोट सि’स्टम’ भनेर क्या’प्सन लेखेकी थिइन्।
गौ’तम र काजलको वि’वाह गत वर्षको अक्टोबरमा भएको थियो। उनको वि’वाह हुँदा पनि भारतमा को’रोना भा’इर’सको महामा’री नै थियो। वि’वाह लगत्तै उनीहरूले मालदिभ्समा ह’नि’मु’न मनाएका थिए।